छोराको लोभले सन्तानको भीड ! :: सुजिता कार्की :: Setopati
मंगलबार, असोज ३०, २०७५
छोराको लोभले सन्तानको भीड !
पाल्पा, भदौ १३
रम्भा गाउँपालिका–१, हुगीकी सुमित्रा विकलाई आफ्नो विवाहको सम्झना छैन ।
माइतीले १३ वर्षको उमेरमा २८ वर्षीय नरबहादुर विकसँग सुमित्रा विकको विवाह गरिदिए । विवाहपछि नरबहादुर, श्रीमती, उनका ससुराका साथ भारत गएको मात्र सुमित्रालाई सम्झना छ । सुमित्रा १५ वर्षको उमेरमा आमा बनिन् । अहिलेसम्म एक छोरा, १२ छोरी, ३८ नातिनातिना र ११ पनाति पनातिना छन् । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर, यो सत्य घटना हो — उनले छोराको लोभमा १३ सन्तानलाई जन्म दिईन् । ६५ वर्षीया सुमित्रा विक र ७० वर्षीय नरबहादुर विक अहिले ६२ सन्तानका अभिभावक हुन् ।
सुमित्राले १३ सन्तानलाई जन्म त दिईन् । तर, सबै छोरा छोरीको नाम पनि सम्झन मुश्किल हुन्छ । अझै त्यसमा ३८ जना नाति नातिनीको नाम कहाँ सम्झन सक्छिन् र ? नाम सम्झन निकै सास्ती नै हुन्छ । पनाति पनातिना त कुन छोरीका हुन् उनलाई हेक्का नै हुँदैन ।
‘बाह्र छोरा तेह्र नाति, हलो र जुवा बूढाको काँधमाथि’ भन्ने उखान हाम्रो समाजमा अझै सुनिए पनि उनका नातिनातिना उखानमा भन्दा तेब्बर बढी छन् । नरबहादुरले छोराको लोभमा छोरी बढी जन्माए । हुन त नरबहादुर पनि आठ छोरीपछि मात्र जन्मेका हुन् । उनी पनि छोराजस्तै धेरै बहिनीका प्यारा एक्ला भाई हुन् । त्यसै पनि एकपटक छोराको जन्म हुन्छ भन्ने आशा मनमा कहिले पनि हराउन नसक्दा परिवार ठूलो बन्यो ।
दुईतीन वटी छोरी जन्मेपछि परिवार नियोजनका लागि केही व्यक्ति घरमा आएको र सम्झाएका पनि हुन् । त्यतिबेला छोरी र श्रीमतीका साथ भारतमा रहेको नरबहादुर बताउँछन् । चार वर्ष मासिक ७५ रुपैयाँ तलबमा सेनामा काम गरेका उनले पछि कपडा बुन्ने काम गरे, जहाँ १५० रुपैयाँ तलब रहेको उनी बताउँछन् । त्यतिबेला छोरा नजन्मेकाले परिवार नियोजन गर्ने कुरा नै भएन ।
नवौँ सन्तानका रूपमा छोरा लोकबहादुर विश्वकर्माले जन्म पाएपछि नरबहादुरको परिवारमा खुशी छायो । छोरा जन्मेपछि पनि उनले अझै अर्को छोराको आशामा रहे तर छोरीलाई छोरासरह नमान्दा छोरा पाउने आशा हराउन सकेन ।
बच्चा नपाउन नरबहादुरकी श्रीमतीले दबाई खाएपछि झनै समस्या झेल्नुपर्‍यो । आठ महिनासम्म रगत बग्यो, नफापेर नै होला । मरिन्छ की भन्ने डरले औषधि सेवन गर्न छाडेपछि चार छोरीको जन्म फेरि भएको उनी बताउँछन् ।
कुन छोराछोरीका कति सन्तान ?
सुमित्राको पहिली (जेठी) छोरी सुनिता रम्भा गाउँपालिका–१, बाँझबारीमा विवाह भयो । १५ वर्षको उमेरमा विवाह भएपनि उनले पनि १५ वर्षमै सन्तान पाईन् । चार छोरा र एक छोरीसहित पाँच जना सन्तान जन्मिए । जेठी छोरीतर्फ अहिले चार नाति छन् ।
दोस्री भारती स्याङ्जामा विवाहपछि उनका तीन छोरी एक छोरा छन् । उनका छोरीबाट पाँच नातिनी जन्मेका छन् । तेस्रो सावित्री दुई छोरा एक छोरीसहित अहिले नवलपरासी बस्छिन् । पहिला रम्भा गाउँपालिका, फोकिसकोटमा विवाहपछि बसाइँसराइ गरेर नवलपरासी गएका हुन् ।
चौथौं गायत्री रम्भा गाउँपालिकाकी दुई छोरा, दुई छोरी र दुई नातिनी, पाँचौँ विष्णु भालढुंगामा दुई छोरा एक छोरी, छैटौँ शान्ति तीन छोरा एक छोरी, सातौँ सुकमाया, पाल्पा बर्दलेमा दुई छोरा, आठौँ फूलमाया एक छोरा, एक छोरी, नवौँ लोकबहादुरका एक छोरी दुई छोरा छन् । नरबहादुरले ४६ वर्षको उमेरमा छोरा जन्माए ।
दशौँ सुलोचनादेवी एक छोरा एक छोरी दिल्लीमा बस्छिन्, रम्भाकी ११ औँ छोरी बनिसराका एक/एक छोराछोरी छन् । बाहौँ हरिकलाका सुनौलीमा एक/एक छोराछोरी, तेह्रौँ छोरी पार्वतीका दुई छोरासहित नवलपरासीको सर्दीमा बसाइ छ ।
सुमित्रा ३० वर्षमा पहिलो पटक हजुरआमा बनेकी हुन् । अहिले पनि छोरीतर्फ नाति नातिना पलाँति जन्मने क्रम रोकिएको छैन । यस वर्ष चारपाँचवटा नातिनातिना देख्न पाइन्छ, नरबहादुरले खुशीको कुरा खुलाए । नरबहादुरका जोडी खेतीपाती, पशुपालन र आरन पेशामा पहिला जति नै सक्रिय छन् ।
बढी सन्तान समस्या नै समस्या
सुमित्राले १३ सन्तान हुर्काउन निकै सास्ती भयो । घरमा सासू ससुरा नभएपछि बच्चा हुर्काउन समस्या भएको हो । केही बच्चा आफ्नो साथमा र केही श्रीमानको साथ लगाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । धेरै सन्तान भएपछि उनीहरूले एसएलसीसम्म पनि पढ्ने मौका कमै सन्तानले मात्र पाए । सुमित्रा निरोगीजस्तो देखिए पनि शारीरिक रूपमा कमजोर नै छिन् ।
माइत जाँदा झनै समस्या
एउटा बच्चालाई काँधमा, एउटा काखमा र अर्कोलाई हातमा समातेर माइत गएको उनलाई सम्झना छ । बच्चा र झोला बोकेर माइत जानुपर्ने झनै समस्या हुने थियो । ‘केही बच्चा घरमै बाउसित राखेर माइत गइयो’, उनी भन्छिन् । १३ सन्तानमध्ये सबै कुशलमंगल रहेकोमा सुमित्रा र नरबहादुरको जोडी सबैभन्दा बढी खुशी छन् । आमा बाका अगाडि कसैको कानकपाल नदुखोस् भन्ने यो सन्तानप्रति उनको सधैँको प्रार्थना रहेको छ ।
स्थानीय दलित अगुवा यमबहादुर नेपालीले अहिले एक छोरा एक छोरी जन्माउने चलन बढेको बताए । छोराछोरीमा विभेद गर्ने बानीको अन्त्य हुनुपर्ने र समाजमा छोरासरह छोरीलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालीले बताए । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १३, २०७४, १२:०५:४७
त्यो दिन ‘टेस्ट’ हुन्छ म कुन खालको एक्टर हुँ: खगेन्द्र लामिछाने
तस्बिरमा हेर्नुहोस् दशैँका खसी
एएफसी यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपालको पहिलो खेल थाइल्याण्डसँग
एक 'रोमान्टिक रिभोल्युसनरी' को अन्त्य
गोरखाकाे फूलपाती हनुमान ढोकामा भित्र्याइँदै (तस्बिरहरू)
३३ किलो सुन प्रकरणका आरोपी बेनु श्रेष्ठ विराटनगरमा
सवारी दुर्घटनामा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु
डेंगु नियन्त्रणका लागि झापामा अभियान
‘कृषिलाई सम्मानित नबनाउने हो भने मन्त्रालय खारेज गर्दिए हुन्छ’ चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’
प्राकृतिक प्रकाेपको उच्च जोखिममा नेपाल डा. कविराज पौड्याल
बलत्कारी नहुनू र हिंसा विरूद्धको आवाज बुलन्द पार्नू भनि दसैंको आर्शिवाद दिऊँ दीपा बस्नेत
बाबाको छोरीलाई पत्र- छोरी तिमी कायर नबन कृष्णराज ढकाल
फेरि आयो त्यो घटस्थापना शिवजी श्रेष्ठ